Nudist osimiri nke Costa Brava | Njem akụkọ
Mariela Carril | 19/04/2022 17:00 | España, Osimiri
Site Blanes, na Spain, na Portbou, na ókè-ala France, nke a na-akpọ Costa Brava, ọdụ ụgbọ mmiri dị kilomita 214 na-adọrọ adọrọ maka ịma mma ya nke siri ike na nke anụ ọhịa. N'akụkụ oke osimiri a, e nwere ogige ntụrụndụ, agwaetiti, osimiri, ogige mmiri na obodo mara mma nke na-adọta ọtụtụ ndị njem nlegharị anya taa.
N'ime ndị njem nleta a, enwere ụfọdụ ndị na-ahọrọ ịgagharị ka nne ha wetara ha n'ụwa, yabụ anyị nwere ike ikwu taa banyere Costa Brava nudist osimiri. Debanye aha ha maka oge okpomọkụ a!
1 Gba nkịtị
3 Onye ọkpụkpọ Cove
8 Osimiri Castell
10 Na Boadella Beach
El nudism ma ọ bụ naturism, ọ bụ ezie na a na-eji ha eme ihe dị ka synonyms, ha abụghị kpọmkwem otu, ha bụ omume ndị metụtara nnwere onwe nke ahụ na gburugburu ebe obibi. Nudism abụghị ihe a na-emekarị na Spen, mana ewu ewu ya etoola ruo oge ụfọdụ ugbu a, n'agbanyeghị na ọ bụghị ihe a na-ahụkarị n'ọtụtụ osimiri Catalan, e nwere ụfọdụ osimiri Mediterenian nke ghọrọ paradaịs nke onwe.
Ọ bụkwa eziokwu na site na Ọnwụ Franco N'afọ ndị 70, ọtụtụ n'ime ndị Spen bụ ndị gara n'ebe ndịda France ịga ije gba ọtọ malitere ime ya n'ala nke ha, na n'ụzọ dị otú a, n'ụsọ oké osimiri Catalan, ndị nudists malitere ịbanye n'ala. A) Ee, Taa, e nwere ihe karịrị 20 nudist osimiri na Costa Brava.
Ọ bụ osimiri nudist kacha mkpa na mpaghara ahụ Baix Empordà. Aja dị mma, nke dị n'ụsọ oké osimiri nke na-emeghe kpamkpam n'ebe ọwụwa anyanwụ nke nwere nkume abụọ na-emechi ya n'ebe ndịda na n'ebe ugwu, ya mere enwere nzuzo maka ndị na-ahọrọ ya.
N'akụkụ osimiri ị nwere ike isi n'oké osimiri ma ọ bụ n'okporo ụzọ bịarute, ụzọ na-agwụ na esplanade n'akụkụ osimiri. A na-ana ụgbọ ala 6 euro. Site na ebe obibi Rosamar enwere ụzọ na-aga n'ụsọ osimiri. Ọ bụrụ na ịchọghị ịkwụ ụgwọ euro 6, ị nwere ike ịhapụ ụgbọ ala gị n'efu n'elu mana ọ naghị atọ ụtọ ịrị elu nke ukwuu ozugbo ogologo ụbọchị dị n'akụkụ osimiri gafere.
Ejikọrọ osimiri ahụ na mmepeanya site n'ụzọ dịtụ siri ike nke na-aga n'etiti Tossa na San Feliu de Guixols, mana ọ bụrụ na i weta nche anwụ na nri gị, ị ga-enwe ọmarịcha oge.
Onye ọkpụkpọ Cove
Ị ga-esi na Cadaqués gaa n'ụlọ ọkụ Cap de Creus n'ụzọ ahụ. Ozugbo ebe a, ị ga-eje ije na ala akọrọ osimiri, gbakọọ maka ọkara otu awa, ruo mgbe ị rutere n'ebe nwere nro bushes, megidere ihe ị na-emekarị na-ahụ n'ebe ndị ọzọ nke oké osimiri. The osimiri na-anabata gị na akụkụ nke oké osimiri na a na-echebe site na ifufe siri ike ma si otú a na-eme ka mmiri dị jụụ na nghọta.
osimiri a mara mma n'ezie, enwere ọtụtụ Ndụ mmiri n’ime mmiri ndị ahụ, e nwekwara ndị na-ehi ụra n’abalị n’oge okpomọkụ. ịtụnanya.
E nwere nkume ndị na-egbochi Cap de Creus ma si otú ahụ gosi akara ebe ọwụwa anyanwụ nke Iberian Peninsula na akụkụ kasị njọ nke Costa Brava. Otu n'ime ihe nzuzo nke ebe a bụ Cala Tavallera. ihe dị ka kilomita abụọ site na Port de la Selva y naanị GR11 nwere ike ịnweta, ụzọ njem nke jikọtara Mediterranean na Atlantic.
Ị nwere ike ịgụ na ọ bụkwa ụgbọ ala 4x4 na-enweta ya, mana ụzọ kacha dịrị nchebe iji ruo ebe ahụ adịbu ma ọ ga-abụ site na ịga ije awa abụọ. Ihe mgbaru ọsọ kwesịrị ya niile: a cove ebe n'oge okpomọkụ ọ dịghị onye ọ bụla na n'oge oyi, ọ dịghị onye ọ bụla. Nwere ụlọ ebe ị ga-arahụ abalị ma tụgharịa uche ma ọdịda anyanwụ na ọwụwa anyanwụ. Ihe mara mma ịhụ.
O nwere ike ịbụ na n'ịdị elu nke okpomọkụ, obere ụgbọ mmiri na-abata na arịlịka maka awa ole na ole, ma ọ bụ naanị n'oge na n'èzí oge nke afọ ọ na-esiri ike ịchọta onye ọ bụla.
Ọ bụ maka naanị nudist osimiri na Central akụkụ nke Costa Brava. Ọ bụ osimiri miri emi na-acha uhie uhie, nkume ndị na-esi n'ọnụ mmiri pụta bụ ihe na-adọrọ mmasị ma dị ịtụnanya, nke nwere ọdịdị ọkara ya nke na-emepụta demure na-akpọ osimiri.
Iji ruo ebe ahụ, ị ​​ga-esi na Camí de Ronda jiri ụkwụ gaa ntakịrị, n'okporo ụzọ dị n'ụsọ oké osimiri. Ọ nweghị ndị mmadụ, ọ nweghị ụlọ mmanya n'ụsọ osimiri. N'ezie, mgbe ehihie ọ nwere ọtụtụ ndò, kpọmkwem n'ihi nnukwu nkume ndị ahụ na-echebe ya.
Mpaghara Baix Empordà nwere Cala Estreta, a obere osimiri nke na n'oge okpomọkụ na-amachibido ịbata ụgbọ ala. Nke a na-eme ee ma ọ bụ ee ị ga-emerịrị jee ije ihe dị ka nkeji iri anọ na ise site na osimiri Castell, n'okporo ụzọ Camí de Ronda ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na-eso ụzọ ọrụ, otu n'ime nkeji iri abụọ na-aga karịa. Ụzọ a na-agafe ozugbo n'okpuru ụlọ elu eletrik nke ebe a na-adọba ụgbọala Castell.
Ma, ọ bụ uru mgbalị n'ihi na ọdịdị na-enye anyị a usoro mara mma coves na-ekwe ka kpomkwem na ịgba ọtọ ma ha na-emeghe n'akụkụ ọwụwa anyanwụ ka ha nwee ọmarịcha ụtụtụ anwụ na anyanwụ na-anọkwa ọbụna ruo etiti oge okpomọkụ.
Osimiri ahụ na-adị jụụ ma ọ bụ karịa n'ihi njem a ga-eme iji ruo ebe ahụ.
Ọ bụ osimiri dịpụrụ adịpụ site n'ìgwè mmadụ na-agba ara. Enweghị ụlọ, naanị ọdịdị. Iji ruo ebe ahụ, ị ​​ga-agbarịrị n'okporo ụzọ na-ejikọta Sant Feliu de Guíxols na Tossa de Mar, na ihe karịrị 350 ntụgharị, ma ṅaa ntị na akara nke na-egosi mmalite nke ụzọ mgbada.
Ụgbọ ala a na-adọba n'akụkụ okporo ụzọ ma si ebe ahụ na-aga n'ime ọhịa ka ọ ghara iyi akpụkpọ ụkwụ na-adịghị mma. Ọbụna n'etiti August ị gaghị ahụ ihe karịrị mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ na nke a ọmarịcha osimiri okwute mara mma nke na-erughị mita 200.
osimiri bụ onyedika, ịgbachi nkịtị, na-enweghị oriri ma ọ bụ ihe ọ bụla ma ọ bụ ọrụ nke ụdị ọ bụla. Ọ dabara nke ọma, edobere ya nke ọma, n'ihi ọrụ nke ndị ọbịa.
Na Castell, a ka nwere oghere ụfọdụ na-amaghị nwoke na a pụrụ ịhụ ụlọ abụọ, n'ebe ugwu na n'ebe ndịda, ụfọdụ n'ime ha letara. Salvador Dali na Martin Dietrich. Ị rutere ebe a site na Palafrugell n'okporo ụzọ, ọ kwụọla ebe a na-adọba ụgbọala ma ọ dị mma n'ihi na etinyeghachi ego ahụ n'ilekọta mpaghara ahụ.
Ị ga-ahụ iyi nke Aubí, na ọbọgwụ na ihe niile, ị nwere ike iri nri n'okpuru osisi pine nke a na-echebe site na anyanwụ, na-aga n'ime ọhịa, hụ ụlọ Dalí ma jee ije n'etiti oghere ndị furu efu. N'oge okpomọkụ, e nwere ụlọ mposi na kayaks nwere ike ịgbazite.
N'akụkụ osimiri Ị nwere ike isi na Cadaqués gaa ebe ahụ, n'etiti ndị ọzọ, nke dị kilomita ole na ole. N'ụzọ ị ga-ahụ fNa narị afọ nke XNUMX hoop, ụlọ ọkụ Catalan, site na nke ị nwere ọmarịcha echiche nke Port Lligat na Cadaqués n'onwe ya.
Cala Nan ọ dị nnọọ anya site n'obodo nta ma ọ bụ obodo ka ọ na-anọgide na-emebibeghị. A na-eji nkume mee ya ma nwee oghere gburugburu ya iji tufuo ya ntakịrị.
Na Boadella Beach
Ọ dị na mpaghara a maara dị ka La Selva, na mpụga obodo Lloret de Mar. Aja ya dị oke arọ, ọ ga-adịkwa ihe dịka mita 250. Ọ nwere ọrụ onyunyo na nnapụta, ụlọ mmanya, ịsa ahụ ma ọ dị Blue ọkọlọtọ.
E kewara ya ụzọ abụọ, nke Sa Roca des Mig dere. A na-akpọ otu ọkara Sa Cova na nke ọzọ Sa Boadella, ma nke mbụ bụ nke kachasi ọrụ na n'akụkụ aka nri bụ ebe ị nwere ike ịme nudism.
osimiri gba ọtọ a bụ otu n'ime osimiri kacha mma na Costa Brava, nke dịpụrụ adịpụ site na ebe ndị njem nlegharị anya nke mpaghara ahụ. dị ihe dị ka kilomita asaa site na Rosas, hapụ ụgbọ ala ahụ n'elu wee gaa n'okporo ụzọ a na-adịghị akwagide. Ọ ga-abụ ihe dị ka nkeji iri abụọ nke mgbada, mana ọ naghị esi ike ma ọlị.
osimiri si shingle, Enweghị ájá, ya mere akpụkpọ ụkwụ kwesịrị ịdị mma iji jee ije nke ọma. Osimiri Ọ dị ihe dị ka mita 150 n'ogologo ma na-enwekarị mmadụ ole na ole.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » España » Osimiri Nudist nke Costa Brava